HGH Thailand - Genotropin GoQuick 12mg 36 IU muThailand inotengeswa - HGH Turkey
Dana & WhatsApp + 66946357637
MoneyGram / Western Union
musha HGH Genotropin GoQuick 12mg 36 IU (Chitupa + Chiremba Kurapwa REMAHARA!)
Dzvanya kana kupona kuti uzorore
Dhanya kana pinika kuti utore
HGH Genotropin GoQuick 12mg 36 IU (Chitupa + Chiremba Kurapwa REMAHARA!)
$ 480 USD
Order izvozvi! Tora mazuva 2-3 DHL kana maviri maawa kuendesa MAHARA!
Kutumira Kwepasi Pose - 1 peni (Pfizer Belgium) DHL + Kutsiva KUSHURE! 2-3 mazuva ebhizinesi - $ 480 USD Kutumira Kwepasi Pose - 2 peni (Pfizer Belgium) DHL + Kutsiva KUSHURE! 2-3 mazuva ebhizinesi - $ 930 USD Kutumira Kwepasi Pose - 3 peni (Pfizer Belgium) DHL + Kutsiva KUSHURE! 2-3 mazuva ebhizinesi - $ 1,370 USD Kutumira Kwepasi Pose - 5 peni (Pfizer Belgium) DHL + Kutsiva KUSHURE! 2-3 mazuva ebhizinesi - $ 2,180 USD Kutumira Kwepasi Pose - 10 peni (Pfizer Belgium) DHL + Kutsiva KUSHURE! 2-3 mazuva ebhizinesi - $ 3,930 USD
Kutumira Kwenyika Dzepasi Pose - 1 peni (Pfizer Belgium) DHL + Kudzokorodza MAHARA! 2-3 mazuva ebhizinesi Kutumira Kwenyika Dzepasi Pose - 2 peni (Pfizer Belgium) DHL + Kudzokorodza MAHARA! 2-3 mazuva ebhizinesi Kutumira Kwenyika Dzepasi Pose - 3 peni (Pfizer Belgium) DHL + Kudzokorodza MAHARA! 2-3 mazuva ebhizinesi Kutumira Kwenyika Dzepasi Pose - 5 peni (Pfizer Belgium) DHL + Kudzokorodza MAHARA! 2-3 mazuva ebhizinesi Kutumira Kwenyika Dzepasi Pose - 10 peni (Pfizer Belgium) DHL + Kudzokorodza MAHARA! 2-3 mazuva ebhizinesi Sarudza setswana yakakwana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + uwandu
Isu tinorumbidzwa nekuda kwemhando yepamusoro yemasevhisi.
Ndezvipi zvakanaka zvaunowana?
- Chaizvoizvo uye chakasimbiswa chigadzirwa kubva kune kambani yemishonga Pfizer Belgium
- License uye chitupa chechokwadi
-Mahara kudzoka garandi, kuchengetedzwa kwemutengi
- Iwo wekutanga mishonga yekurapa muzita rako kubva kukiriniki
- Maawa 2-3 kutumira kutumira kuThailand nekubhadhara mari kana PayPal nekadhi rechikwereti
- Mazuva maviri
- Yemahara seteni sindano, doro swabs (zvese zvaunoda kushandisa)
-Kutonhodza mudziyo uye bhegi rekufamba
- 24/7 hushamwari vatengi rutsigiro uye kubvunza kwachiremba
- Mukana wakasarudzika wekushandura hupenyu hwako nemuviri kuti uve nani, uye zvimwe zvakawanda zvinobatsira
Active substance: Recombinant Human Growth Hormone (Somatropin, HGH), Sterile HGH sarudzo yejekiti inonzi subcutaneous injection
HGH kukwana mumuviri (muvana vaduku), kunowedzera kukura;
Kuvaka muviri - anabolic athari, inomhanyisa kukura kwemasumbu, matishu, tendon uye majoini kurapa kukuvara, 200% -300% nekukurumidza;
Kurasikirwa kwemahombekero, kubatsira kunoderedza kuyerwa kwevanhu vanotambura nekuwedzerwa;
Kurwisana nekukwegura, kubudirira kwemuviri womunhu;
Kuporesa postoperative, makemikari uye zvinokonzera zvipembenene zveganda, zvine simba rekugadzirisa zvinhu;
Kunowedzera kubatana kwepabonde, kunobatsira pamamiriro ezvinhu ose emuviri pamwe chete.
Kubva paongororo dze 38 Nyora kubvunzurudza
Fona / SMS + 66 94 635 76 37
Ramba uri pedyo
Iva wekutanga kutora zvidzikiniso makonti uye kuwedzerwa.
Dhinda (CTRL + D) kuti tiwedzere ku mabhukimeni
Ndapota shandisa mabhukiti ekushandura kuti usvike nokukurumidza uye kuti urambe wakabatana.
+ 66 94 635 76 HGH Thailand Pharmacy, 37 Phetchaburi Rd, Khwaeng Thanon Phaya Thai, Khet Ratchathewi, Krung Thep Maha Nakhon 1, Bangkok, Thailand
Copyright © 2020 HGH Turkey. | E-Commerce Registration Number: 016755234078
Yakawedzerwa kune ngoro yako:
Ona motokari () Buda